रगतसंग जोडिएको जनसम्पर्क समिति १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ००:०४
अमेरिकाको ग्रिन कार्ड र नेपालको विवाह र जन्मदर्ता ३ पुष २०७६, बिहीबार ००:५२
विनोद रोका अमेरिकी अध्यागमन कानुन अनुसार अमेरिकाका नागरिक वा ग्रिन कार्ड भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नजिकका नातेदारहरू, श्रीमती, श्रीमान्, छोराछोरी, आदिलाई अमेरिकामा स्थायी रूपबाट बस्नका लागि स्पन्सर गर्न सक्दछन् । यसरी स्पन्सर गर्ने निवेदन दिने व्यक्तिले विवाह..
निम्तोको दु:खले पनि रक्तदानलाई रोक्न सकेन । २ आश्विन २०७६, बिहीबार ०१:०४
अर्जुन मैनाली पृथ्वीको भुमध्य रेखामा रहेको अफ्रिका महादेशको करीब मध्य भागमा संसारकै गरीब देश कङो हो । प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले कङोलाई बिश्वकै धनी देशमा गन्न सकिन्थ्यो । त्यहाभएका खनिजहरु निकाल्ने हो भने २४ ट्रिलियन युएस डलर भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर..
छोरीको चिठ्ठीको जवाफ परदेशी बाबुबाट २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०२:५२
प्यारो छोरी शुभ आर्शिबाद तथा धेरै माया अनी अटुट सम्झना । छोरी तिमीले मलाई आठ वर्ष अगाडी अर्थात २०६६ फाल्गुनमा लेखेको पत्र आज मेरो सुटकेसको कुनामा भेटे । लामो समय पछी पत्र पढेर खुसी भए तथा भावुक पनि । म धेरै धेरै क्षमा चाहन्छु पत्र को जवाफ पठाउन वर्षौ लागेकोमा, तर..
नेपालमा अमेरिकाको जबर्जस्त क्रेज छ : किशोर नेपाल ९ कार्तिक २०७४, बिहीबार १५:५९
किशोर नेपाल । नेपालको रमणीय धर्तीमा बसेर अमेरिकाको कल्पना गर्नेहरू धेरै छन् । अमेरिकी सरकारले खोलेको डिभी चिठ्ठामा भाग लिने नेपालीको ताँती देखेर कसको मन उल्लासमय नहोला ? नेपालमा अमेरिकाको जबर्जस्त क्रेज छ । धेरै नेपालीलाई अमेरिका अहिलेसम्मको सबैभन्दा..
साथी को ? ८ कार्तिक २०७४, बुधबार ००:३७
जिएस नेपाली अमेरिका आज मेरो सवै भन्दा नजिकको साथी मार्कोस हो । समय, परिस्थिती र स्थान अनुसार नजिकको साथी पनि परिर्वतन भैरहने रहेछ । साथीको परिभाषा आआफ्ना बुझाईमा फरक फरक हुन सक्छ । तर मेरो बुझाइमा मुख्यतय केही मन मिल्दो र केही परिस्थिती मिल्दो मान्छे नै साथी..
ज्ञान, बुद्धि विवेक र संघर्षका सागर बुद्धिसागर १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ००:०४
विश्‍वराज बास्तोला वोर्ड सदस्य मनोनयन । १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ००:०४